Ny fiaramanidina Okrainiana miaraka amina mpandeha 176 tao Iran dia nianjera
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny fiaramanidina Okrainiana miaraka amina mpandeha 176 tao Iran dia nianjera
Fiaramanidina mpandeha zotram-piaramanidina Okrainiana iray misy mpandeha 176 sy mpiasa ao anatiny no nianjera tamin'ny Alarobia maraina fotoana fohy taorian'ny fiaingana niaingan'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Imam Khomeini any Tehran, Iran, dia nitatitra ny masoivohon'ny Tasnim.
Ukraine International Airlines Ny sidina 752 dia voalahatra iraisam-pirenena sidina mpandeha miainga avy any Tehran mankany Kiev, Ukraine, tantanan'ny Boeing 737-800.
Ny B737 dia nidina ny alarobia lasa teo tao amin'ny manodidina an'i Parand, tanàna iray any amin'ny faritany Robat Karim, faritanin'i Tehran.
Toa noho ny "olana ara-teknika" no nahatonga ny fianjerana, hoy ny masoivohom-baovao Iraniana FARS. Ny lozam-piaramanidina dia nohamafisin'ny lehiben'ny seranam-piaramanidina. Raha ny filazany dia nianjera ilay liner taorinan'ny fiainganany.
Ny tatitra avy any Teheran dia milaza fa tsy misy sisa velona.
Misy tatitra tsy marim-pototra sy tsaho momba ny Corps Guardian Islamic Revolutionary Guard fitokonana balafomanga niteraka ny fianjerana.
Ny ekipa mpamonjy voina dia nalefa tany amin'ny toerana nitrangan'ny fianjerana, hoy i Reza Jafarzadeh, mpitondra tenin'ny Organisation Aviation Civile Iran, nilaza fa 170 ny mpandeha ao anatiny.
Ny Ukraine International Airlines PJSC, izay nafohezina hatrany amin'ny UIA, no mpitatitra saina sy zotram-piaramanidina lehibe indrindra any Ukraine, miaraka amin'ny foibeny ao Kyiv sy foibeny ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Boryspil ao Kyiv.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa dia misoroka ny habakabaka iraniana.
Nilaza ny Singapore Airlines taorian'ny fanafihana ny toby amerikana tany Iràka fa ny sidina rehetra ao aminy dia havily hiala ny habakabaka iraniana.
Ireo mpitatitra dia mihazakazaka mandray fepetra hamongorana ny fandrahonana ny fiaramanidiny taorian'ny fitifirana balafomanga an'i Ukraine ny sidina Malaysia Airlines Flight MH17 tamin'ny taona 2014, ka nahafaty olona 298 rehetra tao anaty sambo.
Misy tatitra momba ny #IRGC fitokonana balafomanga niteraka ny fianjerana.
#Ukrainian nianjera tamin'i Tehran Boing # 737-8 ny fiaramanidina avy any #Teheran ny #kief pic.twitter.com/FKtzUGSUFI
- Karimzadeh (@Almiran) Janoary 8, 2020